Ciidamo gadoodsan oo la wareegay xarunta maamulka Gobolka Hiiraan - Bulsho News
Ciidamo gadoodsan oo la wareegay xarunta maamulka Gobolka Hiiraan
Ciidamo gadoodsan oo la baxay Badbaadada Hiiraan ayaa la wareegay xarunta maamulka gobolka Hiiraan ee magaalada Beledweyne.
Ciidankan oo uu hogaaminayo abaanduule hore oo ka tirsanaa Ciidanka Xoogga dalka Korneel lagu magacaabo Cabdilaahi Barre Cilmi ayaa kasoo horjeeda safar la sheegay in madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe uu ku tagayo magaalada Beledweyne.
Ciidamadan oo ku hubeysan hub iyo gaadiid dagaal ayaa ku andacoonaya in ay taageersan yihiin odayaasha dhaqanka iyo bulshada kasoo horjeeda maamulka Hirshabeelle isla markaana ay talaabo qaadi doonaan hadii madaxweyne Guudlaawe uu safar ku yimaado Beledweyne.
Waxa ay fariisimo ka sameysteen gudaha iyo agagaarka xarunta maamulka gobolka Hiiraan.
ilaa iyo hadana ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Hiiraan iyo kan dowlad goboleedka Hirshabelle.
Madaxweyne Farmaajo oo Fahad Yaasiin u magacaabay la-taliyaha...
Madaxweyne Deni oo Gaalkacyo kula kulmay Masuuliyiin ka...
Ciidamo dheeraad ah oo lagu xoojiyey sugida isu...
Kuuriyada Waqooyi oo mar kale tijaabisay gantaalo halis...
Sawirro: Rooble oo la kulmay dhammaan taliyayaasha ciidamada...
Roobab saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka wadada...
Ac Milan & Juventus Oo Bar-Baro Ku Heshiiyay...
Puntland oo soo bandhigtay dhalinyaro tababarka loogu qaaday...
Daawo: Ehalladii dadkii ay laayeen ciidanka Amisom oo...
Faah-Faahinta Heshiiska Ay Barcelona Ka Saxiixanayso Ousmane Dembele...